Top Games on Android 2.3 / 2.2
Ndị mmadụ nwere ụzọ dị iche iche nke na-agafe ha oge, ụfọdụ nche TV ma ọ bụ na fim, na-ege ntị music, ma ọ bụ gụọ Nkea, mgbe ndị ọzọ nanị weghara ha Android Smartphones na-egwu ụdị nile nke egwuregwu dị. Gịnị banyere gị: na-egwu egwuregwu ọkacha mmasị gị ngafe oge? Ịbụ a egwuregwu ofufe abụghị tiketi, a tiketi na ga-emeghe iju mmiri ahụ ụzọ ámá nke mgbe nile iyi nke downloadable Android 2.3 egwuregwu, Android 2.2 egwuregwu n'ihi na gị. Iji nyere gị aka na-ahọpụta ndị kasị mma Android egwuregwu ke 2.3 / 2.2 version Atiya, ebe a bụ ụfọdụ oké selections nke kasị mma egwuregwu ị nwere ike hụrụ gburugburu.
1. Ụra Fred
Platform: Android 2.2 gbakwunyere
E nwere nanị otu okwu na-akọwa egwuregwu a - eri ahụ. Ọ bụ egwuregwu na nwere ọtụtụ ihe mgbochi na-aghaghị izere site egwuregwu. Ọ bụrụ na ị bụ ụdị na hụrụ n'anya na ihe ịma aka mgbe ahụ na-ada red nwere ị nọmba. The Max atụmatụ nke egwuregwu bụ incredibly na-akpali akpali dị ka ọ na-enye ohere ịdị na Falls na ndị enyi kpọmkwem online maka ha ka ha na-ahụ na N'ezie na-achị ọchị n'elu. The isi atụmatụ bụ nche, Max ọdịda, ịrịba 3D ụda, dobe site 30 mbibi, wdg
Ọ bụrụ na ị nwere egwu oké ọchịchọ na-eme ihe ike Gore, egwuregwu a bụ maka gị. Ọ na atụmatụ a Lead Fred na ya na-abaghị uru mgbalị iji ize eze na prediktebul. Na ndị ọzọ na-ọma zere ihe mgbochi o nwere na-aga site multiple horrendous aga-eme dị ka ezere N'ịdị mmebi, isi ebipụ n'ubu, wdg
3. Nnọchiteanya Ukwu Dash
Gị n'ụlọnga Dash bụ blockbuster nledo egwuregwu na-egwuri na ụtọ site karịrị nde 20 Player n'ụwa nile. Players-Esi na-sinik n'ime ndị kasị elu nzuzo egwuregwu ma sonyere na nke a na-agbawa agbawa ma na-ufiop na-agba ọsọ egwuregwu. Ọ na atụmatụ Nnọchiteanya Ukwu Dash ma ọ bụ ọzọ nnukwu villains ma ọ bụ dike agwa dị ka Queen. Ọ bụrụ na ị na-anabata ya, e kenyere unu ọrụ ga-emeri Dr. Quantumfinger, Nnọchiteanya Ukwu Dash iro.
4. Hill ọrịrị Racing
Hill ọrịrị racing bụ n'etiti ndị kasị atọ ụtọ na-eri ahụ Physics hiwere egwuregwu mgbe kere, na oké ozi ọma: ọ bụ Free! Ọ bụrụ na ị na-ekpebi ibudata ma sonyere ọtụtụ nde mmadụ na-ama-egwu egwuregwu, uma ị ga-ezute bụ Newton Bill; a na-eto eto wannabe Uphill racer onye na-na-ejikere ịga na njem n'ebe agafe dịtụbeghị n'ihu.
Platform: 2.2 ọzọ
Jetpack Siri na-acclaimed dị ka otu n'ime ọtụtụ-elu-ụbọchị egwuregwu na ụwa na ị maara ihe: ọ bụ ugbu a downloadable online maka Free! Players Na-atụ anya ona elu tinyere nhọrọ nke ịtụnanya jetpacks mgbe kere na-amalite njem ha na mbara igwe dị ka egwuregwu agwa Barry Steakfries. The agwa bụ nnọọ ihe a maa mma dike na-amalite otu direction ọchịchọ.
Platform: Android 2.3.3 gbakwunyere
Nke a bụ a ohuru na emelitere version nke Despicable Me, otú ima elu na na ahụmahụ ihe-ekwe nkwa a oké oge. Na-eche na Gru-eguzosi ike n'ihe, Minion Rush, na-acha odo odo omimi minions na dị njikere na iba na ha tastiest mpi ma. Ha ozi bụ ịchịkọta osisi mkpụrụ osisi iji kwadebe delicious jelii, Dodge, mpịakọta, na scramble megide ndị ọzọ. Na egwuregwu a unu ga-enwe na-abaghị uru na-akpa ọchị Minion mgbukepụ, ezute iconic ọnọdụ jupụtara ịtụnanya, booby afia, nzuzo, na ọtụtụ ndị ọzọ.
7. n'ime Nwụrụ Anwụ
N'ime Nwụrụ Anwụ bụ ihe na-akpali akpali na nnọọ akpali akpali egwuregwu, ebe Player-ahụ onwe ha na-alụ ọgụ na-adị ndụ n'ime ụwa bịakwasịrị ndị nwụrụ anwụ. The egwuregwu ka nnọọ ghastly Zombie ụbọchị-nke-kalenda odide na-adịghị eche echiche ugboro abụọ tupu mbibi. Ọ bụ ihe na-akpali n'ihi na-egwu egwu egwuregwu a na-adị ndụ ọdachi ada na site ndị a Zombies, ị ga-alụ ọgụ na ihe niile na ị nwetara n'ihi na e nweghị ohere nke abụọ maka gị. Ya mere, na-anọ ndụ, ị ga-abụ na a mgbe nile aga (enweghị iselata) ma na-echebe onwe gị si onslaught nke Zombies.
8. Iwe Nne nne (-agba ọsọ egwuregwu)
Ga-amasị gị na-n'okporo ámá na Iwe Nne nne? Nke a bụ a na-agba ọsọ egwuregwu na atụmatụ a nnọọ di ọku achọ Iwe Nne nne kpebisiri ike ịgbanahụ na Fred mmadụ na-ekpochi ya elu Iwe mgbapu. Na egwuregwu ọ na-akpa nkata ya ụzọ mgbapụ na-achọ ka ị na-edu ya site na n'okporo ámá ka ọ na-gbawara site na ha ka ya ụzọ mgbapụ. Ọ ga-akụtu,-agba ọsọ, na-awụlikwa elu, na slide gburugburu multiple crazy mgbochi na ọ bụ ọrụ gị iji hụ ọ ịga nke ọma.
9. Mmụọ Run
Ọ bụ oge na hapụ gị n'ime anụ ọhịa ahụ, onye ọ bụla nwere ha na dị nnọọ eche nri oge na-Mmetụta - oge bụ ugbu a. Mmụọ Run egwuregwu na-enye ihe Okporo ụzọ na-agba ọsọ site ochie ememe okpukpe, inyere ọbara gị ọgụ, chebe ụlọ nsọ nke mbibi, na ịgbanwe mkpụrụ obi gị na nke anụmanụ. Ị nwere 8 odide na họrọ na-enyere gị iji gbanwee n'ime mbụ temple kere eke. Ọzọkwa, ị pụrụ ịgbanwe ma mpi na Fox, agba, akukonta, Wolf, Unicorn, na panda na ndị ọzọ na-akpali stof.
Jikere a chụpụrụ crazy site na nke a Dr. Driving egwuregwu. Blast site na n'okporo ámá na iji kasị ọtụtụ oké iwe dị ịrịba ama ịnya ụgbọ ala egwuregwu.
11. 100 ụzọ nke Mọ Town
Platform: Android 2.2 elu
Na egwuregwu a Player-esi na-edozi egwuregwu mgbagwoju anya, na-achọpụta zoro ezo ihe, na-eji echiche ha ikike na-agbali na-emeghe ọnụ ụzọ na gbapụ n'aka ụlọ.
12. Ọbịa izu
A bụ ihe ọzọ blockbuster egwuregwu; a kpochapụwo sayensị akụkọ ifo, n'elu ala shooter na e kere site otu 17. Jikere ezute ọbịa udiri anumanu.
13. Nkume Agha Arcade
Way azụ ke Nkume Age ebe isi n'ọnụ lanarị bụ na-aga agha na n'ebo ndị ọzọ n'ihi na ego na ala. Download a egwuregwu ị na-amụta otú nna ngwá agha na-alụ ọgụ maka nlanarị.
14. 100 ụzọ Full
Inwe njikere ịbanye ụwa nke prọfesọ; a crazy amamihe onye kasịnụ ọ rụzuru bụ a ebube igwe.
Na egwuregwu a ọkpụkpọ na-atụ anya aka Emily na ya Swiiti Shop, ntak-a? Nyere ya aka idozi ya chọkọletị; egwuregwu a bụ n'ezie a oké otu maka chocolate ndị hụrụ.
16. Super Laser: The Ọbịa Agha
Na egwuregwu a na Ọbịa fighter nwere ikike e enwekwukwa MOGA. Enwe ndị kasị mma nke nkume agha egwuregwu
17. 100 Kpọchiri Akpọchi ụzọ 2
Agbalị idozi multiple egwuregwu mgbagwoju anya, ojiji, akpọkwa, na ụbụrụ gị ike na-emeghe ụzọ gbapụ ụlọ.
18. Zoro Ezo Ụzọ Mgbapụ
Nke a bụ egwuregwu tozuru oke kasị akpali akpali ụzọ mgbapụ egwuregwu n'ihi na 2015. Jikere dozie pụrụ iche n'ilu na egwuregwu mgbagwoju anya - ihe a ụzọ mbo mbuli gị IQ.
19. Chọta 5 Iche
Jikere tụnyere oyiyi na-achọpụta na 5 dissimilarities n'etiti ha
Tụlee abụọ oyiyi ma na-achọta ise iche n'etiti ha.
20. Izere Mọ obodo:
Chọọ na-achọpụta na zoro ezo ihe na ga-enyere gị ụzọ mgbapụ si Mọ Town.
Ebe a na ị nwere ya ụmụ okorobịa, 10 top Android 2.3 egwuregwu na 10 top Android 2.2 egwuregwu n'ihi na gị ebre ụtọ. Download ha ugbu a ma ọ bụ họrọ onye ọ bụla n'ime gị oke na-amalite na-ekpori ndụ ọ bụla nke na egwuregwu na-abia gị fancy.
> Resource> Game> Top egwuregwu na android ma gụọ 2.3 / 2.2